Email na-aga n'ihu na-eduzi ịzụlite ma na-ejigide usoro nke ọ bụla azụmaahịa n'ịntanetị. Ọ bụ ọnụ, ọ dị mfe itinye ya, ọ bụ atụ, ma ọ dị irè. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche na-eji usoro a eme ihe, ọ ga-enwe mmetụta.
Achọghị spam na-enweghị nchịkwa na ọtụtụ azụmaahịa na-aga n'ihu na-emebi usoro ọrụ nke ndị na-enye email na ndepụta mbubata. Site n'ime nke a, ha na-eweda ha ala aha email nke azụmahịa ha na ozi ịntanetị na ịbanye, a naghị ahụ ndị debanyere aha bara uru. Ha na-aga ozugbo na junk folda.
Mba ise (China, United States, Germany, Ukraine, na Russia) gụrụ ọkara nke ụwa email spam.